Yintoni ukuThengisa ngokuZenzekelayo? Into ekufuneka uyazi ... | Martech Zone
Intengiso ezenzekelayo ligama eligama libonakala lisetyenziswa kuyo yonke into kule mihla. Ukuba iqonga lesoftware linokubangela umyalezo kumamkeli nge-API yawo, inyuselwa njenge ukuzenzekela ngokuzenzekelayo. Ngokoluvo lwam, oku kukunganyaniseki. Ngelixa oku kunokuba yinto ezenzekelayo ehambelana nesicwangciso-nkqubo sabo sentengiso, ayisosisombululo sokuthengisa esizenzekelayo. Ngapha koko, ndiyakholelwa ukuba uninzi lwezisombululo zokuthengisa ezizenzekelayo ezikhoyo- nezona zinkulu- zinomda omkhulu othintela umthengisi ekufumaneni ngokupheleleyo izibonelelo ezizizo zentengiso ezizenzekelayo.
Yintoni ukuthengisa okuzenzekelayo?
Ingcaciso: Ukuzenzekelayo kwentengiso kubhekisa kumaqonga esoftware kunye neetekhnoloji eyilelwe amasebe entengiso kunye nemibutho kwintengiso esebenzayo ngakumbi kumajelo amaninzi kwi-Intanethi (njenge-imeyile, imidiya yoluntu, iiwebhusayithi, njl.njl. Njengoko kuchaziwe kwi Wikipedia.
Le yinkcazo engacacanga engaxhaswanga yinkcazo okanye isiqinisekiso seshishini.
Ndicinga ukuba lixesha lokuba umntu kolu shishino aphakame kwaye enze umsebenzi ongcono wokuchaza ezona mpawu ziphambili kunye nokuguquguquka okuyimfuneko ekuchongeni iqonga lakho njengeqonga lokuThengisa. Sike sabhala ngaphambili kuZenzekelayo weNtengiso. Ayisiyiyo indlela yokwenza nje Ukuphakamisa ukuthengisa ngokuzenzekelayo kodwa utshintsho kumzi mveliso iphelele. Ngelishwa, iinkampani ezenza utyalomali kwi isisombululo sokuthengisa esizenzekelayo basabona iingxaki.
IBoston Interactive iphuhlisiwe le infographic njengesishwankathelo sezicwangciso eziphambili zokuxhasa ukuzenzekelayo kwentengiso ngoku.
Zeziphi izibonelelo zokuThengisa ngokuZenzekelayo?
Ngokutsho Ukungena kwiCRM:
Iipesenti ezingama-63 zeenkampani ezingaphaya kokukhuphisana kwazo zisebenzisa ukuthengisa ngokuzenzekelayo
Amashishini asebenzisa ukuthengisa oomatshini bokukhulisa amathemba okufumana amava anyuke nge-451% kwizikhokelo ezifanelekileyo
Iipesenti ezingama-75 zeenkampani ezisebenzisa intengiso ezenzekelayo zibone i-ROI kungaphelanga nonyaka
Kutheni Ukuphunyezwa kokuSebenza ngokuZenzekelayo kungaphumeleli
Okulindelekileyo koovimba bolwazi -Ishishini lonke lokuthengisa ngokuzenzekelayo lenza umsebenzi owoyikekayo ekumiseni ulindelo ngokuthengisa amaqonga abo. Babelana ngempumelelo kwimeko emva kokusetyenziswa kwetyala, kodwa abathengi babo bayothusa. Ke, abathengi bachitha ixesha elininzi kunye nemali kwiqonga abangazange balisebenzisa. Nanku umzekeliso wam: Ukuthengisa izinto ezizenzekelayo kufana nokuthengisa ifriji kumntu olambileyo. Ifriji ayinakwenza nto ngaphandle kokuba uyigcwalisile ngokutya!
Ukufunyanwa ayisiyiyo yonke into Phantse lonke iqonga lokuthengisa elizenzekelayo lijongana nokufumana kuphela. Kunempembelelo ngakumbi ukuba nesicwangciso esiliqili sentengiso esisebenza ekufumaneni nasekugcinweni ngelixa lisonyusa ixabiso lokuzibandakanya nabathengi. Okumangalisayo kukuba, amanye amaqonga obuchwephesha ngaphandle phaya ayikhathaleli iprofayili yomthengi kunye nomsebenzi-basebenza kuphela ukuphosa amathemba kwimingxunya yokukhokela ukuze ubatyhalele kuguquko.
Iinkampani azinabunewunewu ngokwaneleyo Ixesha nexesha, sibukele njengoko iinkampani zisuka kumnikezeli weenkonzo ze-imeyile ziye kumnikezeli weentengiso ozenzekelayo ngemibono emikhulu yokubuya kwemali kutyalo-mali nakwinkqubela phambili. Ngelishwa, abakulungelanga ukuguqula izicwangciso zabo ngaphakathi, ke bayaqhubeka nokusebenzisa inkqubo ukwenza ibhetshi kunye nokudubula. Enjani yona inkcitho yoqingqo-mali!
Inkqubo yakho yokuthengisa ayihambelani -Umnye umba ophambili wokungcakaza kweqonga lokuzenzekelayo apho baphuhlise isisombululo esilinganayo. Fumana ilayisensi kuye nawuphi na umboneleli omkhulu kwaye bakuxelele kwangoko ukuba ushiye inkqubo yakho ekuqhubeni nasekukhuliseni izikhokelo, endaweni yoko, utshintshele "kwinkqubo" yabo. Benza oku ngaphandle kokwazi nokuba yintoni eyimpumelelo okanye engaphumeleliyo kwintengiso kunye nenkqubo yentengiso yabathengi.
Amanyathelo amaninzi okuGuqulwa Uninzi lwamaqonga asebenzisa inkqubo echaziweyo, eyahlukeneyo ukusuka kulwaziso ngokuguqula. Kulungile ukuba kuyenzeka ukutshatisa indlela amathemba akho ayithathayo ukuguqula, kodwa kumashishini amaninzi, iziganeko ezenzeka phakathi kolwazi kunye nokuguqula zahluke kakhulu. Ufuna isisombululo sokuthengisa esizenzekelayo esinokutshatisa amanyathelo okanye iminyhadala abathengi bakho abayithathayo… inokuba ngu-3 okanye ingangama-30!
Iindlela ezininzi zokuGuqulwa -Kunye nesisombululo esilingana nesayizi enye, kukho indlela enye-elingana-yonke ingxaki. Ukuba ukhonza amashishini ahlukeneyo, abathengi beesayizi ezahlukeneyo, izivumelwano ezahlukeneyo, kunye neemveliso ezahlukeneyo, emva koko uya kufuna ubhetyebhetye bokuphuhlisa iindlela ezininzi kwiinguqulelo ngeminyhadala, ukukhulisa, ii-imeyile, iphepha lokufika, ukubizela ezenzweni kunye neendlela zokufumana amanqaku. Ukuncamathisela kwindlela enye kubakhubazekileyo ubuchule bokuthengisa oomatshini bokuzenzekelayo kwaye kungonakalisa inkcitho engakholelekiyo oyenzayo.
Iindleko zoTshintsho Uninzi lwabathengisi esibaziyo lusebenza ngezixhobo ezimbalwa kunangaphambili. Ukwamkela iqonga lokuzenzekelayo lokuthengisa kufuna ukuba isebe lentengiso liqhubeke nokusebenza nesicwangciso esele siqhuba iziphumo zeshishini ngelixa ngaxeshanye kusenziwa inkqubo entsha ngokuhambelana. Rhoqo amaxesha, oku kufuna izixhobo zokudityaniswa, uhlalutyo lokuthengisa kunye nokugcinwa, kunye nezixhobo zomxholo wokuphucula iphepha lokufika, amaphepha amhlophe, iiwebhu, ukhuphelo kunye nee-imeyile eziyimfuneko ukuze kugcwaliswe amaphulo amatsha entengiso. Sibona phantse wonke umzabalazo wabathengi ngale ... ukusayina neqonga kwaye ungalisebenzisi iinyanga ngenxa yokunqongophala kwesicwangciso sotshintsho.
Ndihlala ndimangalisiwe ukubona iinkampani ezisokolayo ziziseko zesicwangciso sokungena ngesiquphe kwi-bandwagon yokuthengisa ngokuzenzekelayo. Basenokungabinayo inkqubo ye-imeyile eqhubayo… okanye abanalo ulawulo lobudlelwane babathengi (i-CRM), okanye indawo ephathwayo, okanye indawo eyenzelwe ukukhangela, intlalontle kunye nokuguqulwa… kodwa ngoku bajonge ukumilisela isisombululo sokuthengisa esizenzekelayo. Ngantoni?!
Yintoni eyenza isisombululo sokuThengisa ngokuZenzekelayo?
Kukho inani leempawu ekufuneka iqonga lokuthengisa elizenzekelayo ukuze libe nokuxhotyiswa ngokupheleleyo kwaye landiswe njengoko usiya usiba nobunkunkqele kunye nemfuno ikhula. Makhe sixoxe ngazo apha:
Ukungeniswa kwedatha -Ukwazi ukukhupha idatha ngokuzenzekelayo ekuhlawuleni, inkxaso, kunye nezinye iinkqubo ezinxulumene nomthengi sisinyanzelo. Kuyafuneka ikwazi ukongeza, ukwahlula kunye nokuhluza umkhankaso wakho wokuthengisa. Ukusebenza imini yonke ukukhupha, ukuhambisa umyalezo kunye nokungenisa idatha ngokugqithileyo akunjalo esizisebenzelayo.
Ukuthunyelwa kwedatha -Unezinye iinkqubo, njengeCRM, idesika yoncedo, isebe lokuhlawula, njl.njl kufuneka wazi ukuba umcimbi wabathengi wenzeka nini kumkhankaso wakho wokuthengisa. Imizekelo inokubandakanya ukuseta isikhumbuzi sokulandela kwi-Salesforce, okanye ukuthumela isicelo xa uceliwe.
API Kunye nesakhono sokuthumela kunye nokufumana idatha, ifayile ye- API kunyanzelekile ukuba ubambe imicimbi yangaphandle kwaye uhlaziye ulwazi kwimikhankaso yakho yokuthengisa.
Imikhankaso ebangelwe -Ukwazi ukuqala umkhankaso ovela kwisenzo esifanelekileyo kubalulekile. Umzekelo, umntu ukhuphele iphepha elimhlophe- kufuneka ubenakho ukwenza iphulo elixhasa oku kukhokelela ekuvaleni.
Imikhankaso yeDriphu -Ukulungelelanisa uthotho lonxibelelwano kumthengi wakho kubo bonke oonogada kunokubenza bazibandakanye kwaye babafundise ngoguqulo.
Khokelela amanqaku -Ukuba uyakwazi ukwenza ngokusesikweni izikimu zokufumana amanqaku ngokusekwe kwimisebenzi yomsebenzisi, unganxibelelana ngokufanelekileyo nabo bantu kwaye uqonde ukuba bakuphi kumjikelo wokuthenga, wokuhlaziya, okanye wokuphucula.
Ukwahlulahlula kunye nokuhluza -Ukwazi ukutyhala ababhalisile ngaphakathi nangaphandle kwemikhankaso, ukucoca abafumana, kunye nokuhluza izibonelelo kunye namathuba zibonelela kwinqanaba eliphezulu lokwenza ngokwezifiso okuya kukonyusa ukucofa kunye nokuguqula.
Ukudityaniswa kweMithombo yeendaba -Ukumamela kunye nokunxibelelana nabantu ojolise kubo kwimidiya yenkampani yakho kubalulekile. Ukuziphatha kwemithombo yeendaba kwezentlalo kunokukhawulezisa imijikelezo kuba kuyanceda ukunxibelelana ngokukhawuleza kunye nokusondela kwiidilesi kungekudala.
UkuKhangelwa kweNdwendwe -Ukuchonga iindwendwe ezizodwa ngedilesi ye-IP, idatha yomthengi, umsebenzi wefom, ukungena, ukucofa i-imeyile, njl njl.
Iifom kunye nokufika kwamaphepha -Ukufaka idatha kunye nokwakha iiprofayili ezinedatha inokukunika lonke ulwazi oludingayo ukwenza iphulo elilelakho elinika umyalezo olungileyo ngexesha elifanelekileyo.
email Marketing -Kuba kwisiseko sayo yonke inkqubo yokuthengisa ezenzekelayo, oku kunyanzelekile… kodwa kubalulekile ukuba ukwazi ukuyila nokwenza amaphulo aphendulayo kubafundi abashukumayo. Ukubandakanya imiyalezo ebhaliweyo kunye neefowuni ngokuqinisekileyo kukudibanisa!
Ukumaketha kwakhona, ukuphinda ujonge enye into, ukuLahla Umsebenzi kuwo onke amajelo kunye neempawu zakho zenza ukuba utyhale imiyalezo ebunjiweyo esekwe kwinjongo zabasebenzisi.
Ulawulo lokuqukethwe -Ukwazi ukongeza izikripthi, iifom, kunye nokudibanisa umxholo onamandla yinto entle yenkqubo yolawulo lomxholo wakho. Kutheni usazisa isithembiso esitsha xa umthengi etyelele indawo yakho… ubanike umyalezo owenzelwe wona endaweni yoko!
Amaphulo angenasiphelo, aMnqamlezo -Indlela enye ayonelanga. Phantse yonke inkampani ifuna ubuncinci ukusebenzisana okungundoqo kokubamba izikhokelo, ukuvuselela abathengi, kunye nokuthengisa abathengi abakhoyo ngoku.
Kukho uphando olwenziwayo phaya indlela abathengisi abakhetha ngayo isisombululo sentengiso, kodwa kuya kuba kuhle ukuba elinye lamagorha ophando afana neForrester okanye uGartner angathetha ngakumbi kwi-churn, iindleko zobunkunkqele, iindleko zokuphumeza, kunye nezixhobo eziyimfuneko ekuphumezeni nasekuveliseni ukuthengisa okuzenzekelayo kwentengiso. Ndiyakholelwa ukuba uninzi lweenkampani azilungelanga kuphela umgudu ofunekayo, kananjalo abaqondi ukuba abanobunkunkqele ngokwaneleyo ukufumana ezi nkqubo emhlabeni. Iindlela zokuthengisa ezinobundlongondlongo ziqhuba ukuthengisa ukuzenzekelayo kuvala- kodwa ukunqongophala kwezixhobo kunye neempawu kunciphisa amandla abo okufumana amandla ngokupheleleyo.
Alithandabuzeki elokuba iinkampani ezihlawula kakhulu kubanikezeli beenkonzo zokuthengisa nge-imeyile kufuneka bajonge iinkqubo zokuthengisa ezizenzekelayo ukwandisa ukusebenza kwazo. Banokugcina imali encinci yokwenza amaphulo afanayo ngelixa beqokelela idatha exabisekileyo yemikhankaso ezayo. Kodwa kubaluleke kakhulu ukuba amashishini aqonde ukuba liqonga lokuzenzekelayo elimele lenzelwe bona kunye nezixhobo eziyimfuneko ukuze baxhase ngokupheleleyo ukonyusa imbuyekezo yentengiso kutyalo-mali.
tags: ukulahlwaApihlawulaCMSCRMijelo elinqamlezileyoulawulo oludibene nabathengiIinkcukachaImikhankaso yedriphui-imeyileemail Marketingisihluzoiifomuyenkxasomaphephaukukhokela amanqakuukuzenzekela ngokuzenzekelayoiqhinga lokuthengisa ngokuzenzekelayoukuthengisa ividiyo ezisebenzelayoukumakethaukubuyisela kwakhonaisahluloUkulahlwa kwinqwelo othengela kuyoinkxasoi-imeyile yentengiselwanokubangelwe amaphuloi-imeyile ebangelaelingenamkhawuloukulandelwa kweendwendweyintoni ukuthengisa okuzenzekelayo
Epreli 5, 2016 ngo-7: 47 AM
Ividiyo eyoyikekayo. Ndingabuza ukuba yeyiphi isoftware oyenzileyo?
Epreli 5, 2016 ngo-2: 39 PM
Molo Ben! Andiqinisekanga- ividiyo yoqobo yapapashwa ngu Ingcebiso ngeTekhnoloji kwiYouTube!
Epreli 27, 2016 ngo-2: 54 AM
Ewe, ukuThengisa ngokuZenzekelayo sisixhobo esinamandla kunye nesisombululo kuLuhlu lweeNkokeli kunye nokufumana amathuba anokubakho kuba imithombo yeendaba zentlalo ibonakala kuluhlu olubanzi lweshishini. Kwaye i-B2B iyindlela efanelekileyo yokuzibandakanya kula mashishini nge-imeyile. Uhlalutyo lukwabonelela ngenkuthazo enkulu ukubona ukuba ukhula njani kwaye usebenze ngempumelelo okanye hayi. Kwaye ndathi, "Kunempembelelo ngakumbi ukuba nesicwangciso esiliqili sentengiso esisebenza ekufumaneni nasekugcinweni ngelixa lisonyusa ixabiso lokuzibandakanya nabathengi." Oku kuyinyani. Ukugcinwa kufuneka kube yinjongo. Inqaku eliluncedo elinje.
ULynn Ray Magers-Pardo
Jul 4, 2016 ngo-9: 00 PM
Enkosi!! Ndikhwaza ngokoqobo Enkosi! Ngelixa ufunda le-inomdla kakhulu!